Daawo Dacwad lagu oogay Wasiirka Warfaafinta Somalia oo dilal geeystay | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Daawo Dacwad lagu oogay Wasiirka Warfaafinta Somalia oo dilal geeystay
Mar 23, 2016 - Comments off	ASOJ.ORG –
Wasiirka Warfaafinta Mohamed Cabdi Xayir Maareye,wuxuu ku eedeeysan yahay inuu dilay Wariyeyaal ay ka mid ahaayeen Hindiya Xaaji iyo Cabdullahi Caanogeel.
Wasiirka wuxuu xiray,wuxuu u hanjabay Wariyeyaal madaxbanaan oo Soomaaliyeed.
Wasiirka wuxuu xaqiray awoodda xubnaha gudigga madaxabanaan ee loo doortay iney soo diyaariyaan Sharcigga Xeerka Saxaafadda,wuxuuna Baarlamaanka horgeeyay xeer ku xadgudbaya madaxbanaanidda iyo xaquuqda Suxufiga,isagoo ka been abuuray gudiggii xeerkaas sharciyan loo igmaday soo diyaarintiisa kaas oo aan xubin ka ahaay.
Wasiirka Warfaafinta wuxuu lacag laaluusha siiyay shaqsiyaad lagu sheegay gudigga madaxabanaan ee xalinta khilaafka Nusoj kuwaas oo aan marnaba heysan saxiixa Ururadda Saxaafadda ka jira Somalia.
Wasiirka Warfaafinta Somalia wuxuu ku xadgudbay madaxbanaanidda Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ isagoo nin gacan ku dhiigle ah oo lagu magacaabo Mohamed Ibrahim Bakistan ku sheegay inuu yahay xoghayaha guud ee NUSOJ.
Wasiir Maareeye wuxuu lunsaday oo lagu dacweeyay lacago uu magaca Ururadda Saxaafadda madaxa banaan iyo kan Nusoj ku cunay taas oo dacwadiisa laga furay Kenya ,ayna xukun ku riday Maxkamadda sare ee dalkaas.
Wasiirka Warfaafinta Somalia wuxuu soo saaray amaro uu Shirkadaha Internetka Muqdisho ku amray iney xanibaan booqashadda Website-yadda madaxabanaan ee Somalia,isagoo fasaxay Website=yadda Al-Shabaab ee maalin walba baahiya warbixinadda lagu gaaleeysiiyo indhaha bulshadda Soomaaliyeed sidoo kalena lagu hanuuniyo dhalinta Soomaaliyeed.
Wasiirka Wuxuu ku eedeeysan yahay inuu ka mid yahay argagixisadda Al-Shabaab sida uu xaqiijiyay Xasan Xanafi Xaaji.taas oo ka dhigan inaan xiriir toosa iyo mid dad badan lala yeelan karin qof argagixiso ah.
Wasiirka wuxuu ku kacay qiyaano Qaran,isagoo jibiyay qodob ka mida Dastuurka uu ku dhaartay ee dhigaya iney Muqadas tahay Midnimadda Jamhuuriyadda Somalia.
Wasiir Maareeye wuxuu warbaahinta ka sheegay tirooyin kala duwan iney Somaliland ahaan jirtay hadana tahay dal madaxbanaan ,isagoo markii ugu dambeeysay maalintii Axadda ee la soo dhaafay Madaxweynaha hortiisa ka yiri “Somaliland waa dal uusan UN-ka aqoonsaneeyn oo aan ka mid ahay goboladda Somalia”
Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ASOJ oo tixraacaya dimbiyadda uu galay Wasiirka Warfaafinta Mr Maareeye.
Asoj oo tixraaceeyso go-aanadda ka soo baxay hogaanka sharciga ee nusoj,Ururadda Saxaafadda madaxabanaan ee Puntland ,Galmudug,Khaatumo,Awdal,Jubaland,Hiiraan,Shabeeladda dhexe,Banaadir,Shabeeladda hoose,Koofur Galbeed waxaan si rasmiya xiriirka ugu jarnay Wasiirka Warfaafinta Somalia anagoon u hogaansami doonin go-aankasta oo ka soo baxa.
ASOJ waxeey Suxufiyiinta Soomaaliyeed ugu dhaaranayaa,una xaqiijineysaa inaan dacwad la xiriirta dhamaan dimbiyadda uu galay Maareeye ku oognay taas oo aad dhawaan maqli doontaan natiijadeeda.
ASOJ wuxuu Suxufiyiinta Soomaaliyeed ugu bishaareeynayaa in la joojiyay lacagahii la siin jiray Gacan ku dhiigle Mohamed Bakistan iyo Wasiir Maareeye taas oo si sharci daro iyo been abuura looga qaadi jiray Hay’ado Yurub iyo Mareykan ah kuwaas oo fadhigoodu yahay Kenya.
Ugu dambeyn Ururka ASOJ oo ku hadlaya codka Ururadda ka jira goboladda dalka Somalia iyo kan Suxufiyiinta madaxabanaan ee Soomaaliyeed ma aqbali doono go-aankasta oo ka soo baxa guddi ku sheega xalinta Khilaafaadka NUSOJ iyo Wasaaradda Warfaafinta,waxaana ku baaqeeynaa in si degdega loo turbixiyo Xeerka sharcigga Saxaafadda madaxabanaan ee Jamhuuriyadda Somalia.